Maitiro ekuwana kambani inoshanda hupenyu mushumo | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 08/06/2021 08:54 | makambani
Chokwadi iwe unoziva iro rehupenyu hwehupenyu mushumo mushe, kana kumbobvunza, mukati mehupenyu hwako hwese, mashoma. Nekudaro, izvo zvinozivikanwa nevashoma ndezvekuti kune zvakare iri kambani inoshanda yehupenyu mushumo. Zvino, iwe unowana sei iro rinoshanda rehupenyu mushumo?
Kana iwe uri muzvinabhizimusi kana muridzi webhizinesi uye usati wambonzwa nezvazvo zvisati zvaitika, iwe unofarira. Isu tichakuudza chii chinonzi kambani inoshanda hupenyu mushumo, kuti ungaiwana sei uye nezvimwe zvinhu kuti iwe unofanira kuyeuka.
1 Ndeupi unoshanda hupenyu mushumo wekambani
1.1 Ndiani anogona kuukumbira?
2 Basa rehupenyu mushumo wekambani: ine data ripi
3 Maitiro ekuwana iyo inoshanda kambani hupenyu ripoti
4 Ko kana iyo data yauinayo nezvekambani yako isina kufanana neshumo
Ndeupi unoshanda hupenyu mushumo wekambani
Usati wadzidza maitiro ekuwana iyo inoshanda yekambani mushumo wehupenyu, iwe unofanirwa kunzwisisa pfungwa yayo. Zvinoenderana neSocial Security, inoreva gwaro rine rakakosha uye rakakosha ruzivo maererano nemakambani 'Zvekuchengetedzwa kweMipiro, asi nguva dzose kubva gore rapfuura
Chirevo ichi yakatanga kutumirwa muna 2018, uye kusvika parizvino gore rega rega riri kutumirwa kumakambani vanoita misha yavo kuburikidza neDirect Settlement System.
Chinangwa hachisi chimwe kunze kwekubatsira makambani kuve neruzivo rwakakodzera pamusoro pechipo chavo, pamusoro pekurerutsa chisungo chekupa, kupa ruzivo uye kupa yakatarwa dhata maererano nemari uye kuverenga kune mumwe nemumwe mushandi.
Ndiani anogona kuukumbira?
Kana iwe uri kambani yakanyoresa vashandi mugore rapfuura, kana iwe wakatumira zviyero zvequota kuburikidza neDirect Settlement System, unozogona kuzvikumbira kana kumirira iyo Social Security kuti ikutumire kwauri.
Basa rehupenyu mushumo wekambani: ine data ripi
Sezvo nemushandi wehupenyu mushumo, mune yekambani mushumo data rakafanana. Izvi zvakakamurwa kuita zvikamu zvina:
Kuzivikanwa data. Ndiwo ruzivo rwunowanikwa nezve iyo kambani: chikonzero kana nhamba yekuzivisa mutero, Main Chinyorwa Kodhi, yakanyoreswa hofisi, email, uye Sekondari account kodhi.
Quote data. Icho chikamu chakakosha kwazvo nekuti chinosanganisira data rese rekufarira: misha yakapihwa; mubhadharo wakaverengerwa neTDG; mabheseni emipiro, kubvisa uye muripo; zvinhu zvemubhadharo zvakabhadharwa; mari yakapinda; chimiro chemari yeSocial Security mipiro; uye kumisikidzwa kwezvikamu.
Imwe dhata kubva ku Main CCC. Iko kupi chero rudzi rwekambani ruzivo rwunogarwa zvine chekuremekedza iyo Main Contribution Account Code. Zvakare pano, zvibvumirano zvine kambani uye nedzimwe dhata dzekufarira dzine chekuita neMain CCC (vanobatana kana vanobatsirana, zvibvumirano pamwe chete, nezvimwewo) zvaizosanganisirwa.
Ruzivo rwemifananidzo. Mauri iwe waunowana shanduko yeiyo Social Security mupiro; huwandu hwevashandi pakupera kwemwedzi wega uye nerudzi rwechibvumirano chebasa; huwandu hwebasa zvinoenderana nechibvumirano uye nemaawa chaiwo. Inotaridzika chaizvo nekuti inokutendera iwe kuti uwane iro ruzivo nekungotarisa kubhawa uye kutenderera magirafu ayo ainokupa.
Dhata dzese idzi dzinofanirwa kuenderana nezvauinazvo mukambani yako. Muchokwadi, tinokurudzira kuti iwe uite rekodhi yakafanana neiyo mushumo kuitira kuti, pakupera kwegore, iwe uve nechokwadi chekuti data iro reSocial Security rave rakafanana iwe raunobata.
Kuwana mushumo wehupenyu hwekambani kuri nyore kwazvo kuita. Zvese zvaunoda kuti uwane iyo Social Security webhusaiti uye, kana uchinge uripo, iyo Social Security Elektroniki Hofisi.
Iwe unofanira tsvaga chikamu "Telematic Notifications" uye, kana uchimanikidza, inotsvaga "Telematic Communications".
Chirevo chinofanira kuoneka munzvimbo ino uye unogona kuchirodha pasi, asi zvakare chinokutendera iwe kuti uwane mamwe mafambisirwo akakodzera. Kana iwe usina, unogona kubata Social Security kuti uone kana paine dambudziko nedata rakapihwa kana iro ravanogamuchira, kunyanya kuti uone kana urikuita zvinhu nemazvo uye kuti haupinde mumatambudziko.
Nezve kutaurirana, kana iwe uchinge uri mukati meElectronic Office unogona kutarisa mukati «Makambani / Kubatana uye Kunyoresa / Runhare uye kutaurirana kweemail kwemushandirwi kuti uone kuti vane dhata rakaringana kuitira kuti zviziviso zvikwanise kusvika kwauri.
Ko kana iyo data yauinayo nezvekambani yako isina kufanana neshumo
Zvinogona kunge zviri izvo kuti, mushure mekuziva maitiro ekuwana iyo inoshanda hupenyu mushumo wekambani, uye kurodha pasi, iyo data irimo haina kuenderana nezvauinazvo. Ndokunge, pane kusaenzana pakati pavo. Izvi hazvishamise kuti zviitike, hazviwanzo kuitika, asi pane zviitiko izvo zvinogona kuitika.
Uye zvekuita mune izvo zviitiko? Kutanga Kwazvose, Chinhu chekutanga chatinobvunza ndechekuti iwe uongorore iyo data iwe yaunofanirwa kuona kana paine paine kukanganisa kwevanhu paunenge uchigadzirira yakavanzika mushumo wekambani yako, kana chimwe chinhu chawakanyora zvisirizvo. Kana zvisiri, uye zvakadaro hazvienderane neDzidziso Dziviriro dhata, iwe unofanirwa kutsvaga chero zvikanganiso uye wone kuti wanyatso gadzirisa ruzivo rwese kubazi.
Kana zvirizvo, uchafanirwa ita musangano kuSocial Security kuunza nyaya uye kugona kugadzirisa ruzivo rwavanarwo kukambani yako.
Kana iri mhosho yako, iwe uchafanirwa kuita musangano neSocial Security kugadzirisa mamiriro ekambani. Izvi zvinogona kureva kuti vanokuisira zvirango, asi kana vakaona kuti waita mukutendeka, hapana chakakomba chinofanira kuitika; Zvino, kana ukasadaro uye ivo vakakuwana, ipapo iyo faindi inogona kuve yakakwira zvakanyanya.
Iye zvino zvauri kuziva zvishoma nezve ichi gwaro uye maitiro ekuwana iyo inoshanda yekambani mushumo wehupenyu, kana iwe unayo, iwe unotoziva zvaunofanira kuita kuti utarise kuti data rakarurama here uye kuti, nekudaro, uri kutarisira iyo kambani .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Maitiro ekuwana iyo inoshanda kambani hupenyu ripoti
inoita 21 maawa
Pindura kuna Gilbert